Saacid & Wasiiro ku kulmay Muqdisho
17 Nov 17, 2012 - 5:35:50 AM
Ra'iisul wasaaraha Somalia Saacid Faarax Shirdoon ayaa maanta 17 November ,2012kulan la yeeshay wasiirada cusub ee DF iyo kuwii hore, iyadoo kuankaas looga hadlay sidii ay wada-shaqeyn u dhexmari lahayd wasiirada cusub iyo kuwii hore.
Kulankan oo ka dhacay Villa Somalia ayaa waxay wasiiradii kulmay isku dhaafsadeen fikrado kala duwan oo ku saabsan howlihii lasoo qabtay iyo kuwa xukuumada cusub sugayay, iyadoo labada dhinac ay isku raaceen inay wadashaqeeyaan.
Wasiirkii hore ee Warfaafinta Xukuumadii KMG ahayd C/qaadir Jaahweyn ayaa sheegay in kulanka uu ahaa mid ay isku barteen wasiiradii iyo kuwa cusub loogana hadlay sidii ay labada dhinac u wadashaqeyn lahaayeen.
"Hambalyo ku saabsan howshii ay soo qabteen ayaa loo jeediyay wasiiradii hore, runtiina kulanku wuxuu ahaa mid jawi wanaagsan ku bilowday kuna dhamaaday, waxaana balanqaadnay inaan la shaqeyn doono wasiirada cusub" ayuu yiri Jaah-weyn oo saxaafada la hadlay.
Wasiirka Wafaafinta Xukuumada cusub C/llaahi Ciilmooge oo isna saxaafada hadal siiyay ayaa amaanay xukuumadii hore isagoo sheegay in hadii aysan shaqo qaban lahayn aan la joogeen halka maanta la joogo.
"Kulanka waxaa soo qabanqaabiyay Ra'iisul Wasaaraha wuxuuna ahaa mid xog kala qaadasho ah, waxaana naga go'aan intaan xilka hayno inaan qabano howlo adag" ayuu yiri Ciilmooge oo intaas ku daray inay rajeynayaan in marka uu waqtigoodu dhamaado ay xilka wareejiyaan iyadoo uu wax-qabadkoodu muuqdo.
Ugu dambeyn, wasiirada labada dhinac ayaa sheegay inay kala kororsan doonaan waayo-aragnimada, waxaana xukuumada cusub oo ka kooban 10 wasiir ay codka kalsoonida ah heshay todobaadkii lasoo dhaafay.